Escombros, nke Fernando Vallejo dere
Ihe niile nwere ike ịda. Nke kadị nke ahụ, ndụ dịka mmadụ na -ezere mgbawa nke afọ. Mgbe ahụ enwere mkpọmkpọ ebe, nke anaghị echeta ihe ndị dị mkpa n'oge. Maka na emechara, enweghị ncheta na -ejigide mmetụ ma ọ bụ olu na ...
N'ileghachi anya azụ, nke Juan Gabriel Vásquez dere
Enwere ihe karịrị ihe dị ize ndụ maka mgbanwe nke taa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na -ebubata ihe niile na izi ezi nke nkwenye nke onye na -emegwara onye ahụ dara jụụ, n'agbanyeghị na ịgbachi nkịtị na -abịa site na ịgbachi nkịtị, site na mkpochapụ nke ọzọ. Otu a ka mmadụ ga -ejedebe, mikpuo n'ime uka, kwenye site na mkpali ...
Ụmụ nwanyị nke mkpụrụ obi m, nke Isabel Allende
Ịmata site na ụzọ ụzọ isi nweta mkpali, Isabel Allende n'ọrụ a ọ na-atụgharị n'ime existential gibberish nke ntozu okè ebe anyị niile na-alaghachi n'ihe e chepụtara amata anyị. Ihe na-emetụ m n'ahụ dị ka ihe okike na nke oge ya, dị ka ajụjụ ọnụ a gbara na nso nso a nke ...
Omume ncheta, nke Andrea Camilleri dere
Ọ bụ ihe na -achọsi ike etu ọ ga -esi bụrụ na enweghị onye ode akwụkwọ nọ n'ọrụ, ihe nwere ike bụrụ akwụkwọ na -akpaghasị ihe, imebiga ihe ókè na ndụ, na -emecha bụrụ ụkọ maka akụkọ ifo mgbe ọ nwụsịrị. Mana ụzọ zuru oke maka ndị nkịtị nke nwere ike ọ gụtụbeghị onye edemede nke na -adịbeghị anya hapụrụ ebe ahụ ...